« Vay maharary tato anatin’ny ligy no nopotserina. Isan’ireo mpikambana tao taloha izy ireo saingy nampiseho ohatra ratsy tato ka tsy maintsy nakana fankatoavanan’ny fivoriam-be, izay masi-mandidy », hoy i Henintsoa Hajatiana Rakotoarimanana na i Tôta, filohan’ny ligin’Analamanga, baolina kitra.
Io omaly io iahny koa no nanomezan’ireo seksiona sivy mpikambana ao main’ny fivoriam-ben’ny ligy Alfa fitokisana indray ny birao ankehitriny. « Tanjona ny hanatsara hatrany ny tontolon’ny baolina kitra eto Analamanga. Isan’ireo vokatra tsara azo tamin’ity voninahitr’i Madagasikara amin’ny fifaninanana Afrikanina », hoy ihany ny filohan’ny ligy Alfa.